လေထန်ကျောင်းက ကွမ်းဆရာ (သိမ်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လေထန်ကျောင်းက ကွမ်းဆရာ (သိမ်း)
လေထန်ကျောင်းက ကွမ်းဆရာ (သိမ်း)
Posted by တောတွင်းပျော် on Feb 22, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 30 comments
ဝဲသီလာရွာမှာ အသံမစဲပဋ္ဌာန်းပွဲလုပ်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ဖြစ်သွားသေးတယ်။
(ဒါက ဂေဇက်ရွာသူ၊ရွာသားတွေ ဝေဖန်ဆွေးနွေးနိုင်ကြအောင်လို့ ပါ။ တောတွင်းပျော်ကတော့ဉာဏ်မမှီတော့ 
ဘာမှ ဝင်မဆွေးနွေးတော့ ပါဘူး)
ကျောင်းမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ပြောပြကြလို့တစ်ညနေ ကျောင်းအဆင်းမှာ ဝဲသီလာရွာကို ကျောင်းသားလေးတွေနဲ့လိုက်သွားခဲ့ တယ်။ သူတို့ ပြောတဲ့ အတိုင်း အဟုတ်ပါပဲ။
ပဋ္ဌာန်းရွက်တဲ့ဦးဇင်းတွေ၊ ကိုရင်တွေထိုင်တဲ့စားပွဲရှေ့ က လူပရိဿတ်နဲ့ခြားထားတဲ့ရာဇမတ်ကာ
တန်းပေါ်မှာ ငှက်လေးတစ်ကောင်။ ငှက်အမျိုးအစား နာမည်ကိုတော့တောတွင်းပျော် မခေါ်တတ်။ ပဋ္ဌာန်းရွက်တဲ့ဦးဇင်းတွေဖက်လှည့် ပြီး တရားနာတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ထိုင်နေတာတွေ့ ရတယ်။ တချီတချီ မျက်ခွံ အဖွင့် အပိတ် လုပ်တာကလွဲရင် တုတ်တုတ်ကလေးမှ မလှုပ်။ တောတွင်းပျော်ရောက်သွားတော့ဒီမှာနားတာ ၂ရက်ရှိပြီတဲ့ ။ ကျောင်းဒကာတွေက သူ့ ကို ကိုင်မ ပြီး ပဋ္ဌာန်းရွက်တဲ့စားပွဲပေါ်တင် အစာနဲ့ ရေ ချတိုက်လည်း
မစားမသောက်၊ သူနားတဲ့အဲဒီ ရာဇမတ်တန်းပေါ် ပြန်တက်ပြီး ပဋ္ဌာန်းရွက်တဲ့ဦးဇင်းတွေဖက် ငေးကြည့် မြဲ
ငေးကြည့် နေတယ်။ သူ့ ပုံစံက စူးစူးစိုက်စိုက် တရားနာနေတဲ့ ပုံမျိုး။ မကျန်းမာတာလည်း မဟုတ်။ ဘယ်သူ ကိုင်ကိုင် အကိုင်ခံတယ်။ ပထမတော့ အထူးအဆန်းဆိုပြီး လူတွေက သွားသွား ကိုင်ကြည့် ကြသေးတယ်။
နောက်တော့ မှ ကျောင်းဒကာတွေက သူ့ တရားနာတာ အနှောက်အယှက်မဖြစ်ရအောင် တားမြစ်လိုက်ကြတယ်။ တောတွင်းပျော် ကိုယ်တိုင် ပဋ္ဌာန်းရွက်တဲ့ဦးဇင်းတွေရှေ့စားပွဲဘေးက သေသေချာချာကြည့် လာခဲ့ တာ။
ညသန်းခေါင် လော်စပီကာက ထွက်လာတဲ့ပဋ္ဌာန်းရွက်သံတောင် တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် စိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတတ်သေးတာ။ ခု လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်သာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီငှက်ကလေးက စူးစူးစိုက်စိုက် တစ်ချက်ကလေးတောင်မလှုပ် တရားနာယူပုံကတော့ ထူးဆန်းအံ့သြစရာပါပဲ။ တောတွင်းပျော်
သွားကြည့် ပြီး နောက်တရက် ၃ ရက်မြောက်နေ့ မှာ အဲဒီ ငှက်ကလေး အောက်ကိုပြုတ်ကျ သေသွားတယ်။
အသက်သေသည်အထိ ပဋ္ဌာန်းတရားနာယူသွားတဲ့ငှက်ကလေးအကြောင်း ဆွေးနွေးနိုင်အောင်လို့ ပါ။
ဇန္နဝါရီလကုန်ပိုင်းရောက်တော့ကျနော်တို့ ရွာက မူလတန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဆီ ပို့ ဖို့စာမေးပွဲဖြေမယ့်ကျောင်းသားစာရင်းတွေ စစ်ကြည့် တော့ဒီအချိန်ထိတိုင် ကျောင်းဝင်ကြေး မပေးသွင်းရသေးတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ဆရာတင်ဋ္ဌေးကိုမေးကြည့် တော့သူ့ အိမ်က ကျောင်းနဲ့ ကပ်ရက်။ နေ့ လည်ကျောင်းဆင်းတော့အဲဒီအိမ်ကို ကျောင်းဝင်ကြေး ကိစ္စပြောဖို့ တက်သွားတာ ကျောင်းသား အမေနဲ့ တန်းတွေ့ လိုက်ရတယ်။
“ မုဂါ၊ မုဂါ့သားလေး ကျောင်းဝင်ကြေး မသွင်းရသေးလို့ကျနော် လာတောင်းတာ မုဂါ”
“တရ၊ သူ့ အဖေ နေမကောင်းတာကြာပြီ၊ အလုပ် ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တာကြာပြီ။ မုဂါတို့ လည်း
ခက်ခဲလွန်းလို့ ပါ။ နောက်မှပေးလို့ ရမလား” တဲ့သူကတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မုဂါရဲ့ ။
အခုတောင်ကျောင်းပိတ်တော့ မှာ… ဆိုတော့တကယ်ကို ခက်ခဲလွန်းလို့ ပါ တရရယ်… သူ့ အကို ကိုတောင်
ကျောင်းမထားနိုင်တော့ ဘူး ဆိုပြီး တတိယတန်း ကျောင်းသားအရွယ်လောက်ရှိမယ့်သူသားကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ စတုတ္ထတန်း၊ တတိယတန်း ကျောင်းသားလေးတွေကို အကုန်မှတ်မိပေမယ့်သူ ကို ကျနော် မမြင်ဖူးဘူး။ ကျနော်တော်တော်လေး ဒေါသထွက်သွားတယ်။ စကားလုံးတွေ အများကြီး အန်ကျကုန်တယ်။ မုဂါကြီးက ငြိမ်ကုပ်လို့ ။ ကျနော် ဒေါသထွက်တာက ကျောင်းဝင်ကြေး မသွင်းနိုင်တဲ့ 
ကိစ္စမဟုတ်။ သူ့ သားတစ်ယောက်လုံးကို ကျောင်းထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စ။ သူ့ သားက အလုပ် လုပ်နိုင်တဲ့ 
မုဂါတို့ကျနော့ ကိုစောစောက ဘာလို့ မပြောကြတာလည်း။ စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ သာ ဒီလိုပြောလိုက်
ပေမယ့်ကျနော်က ဒီကျောင်းကို နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတာ။ စောစောကသာ ကျနော် ဒီကျောင်း ရောက်လာနိုင်ခဲ့ ရင် ဒီကလေး သေချာပေါက် ကျောင်းနေစေရမယ်။ မိဘတွေက မထားဘူးဆိုရင်တောင်
ရွာလူကြီးတွေနဲ့ဆရာတော်လေးကို အကူအညီတောင်းပြီး ကျောင်းထဲကို အတင်းဆွဲသွင်းမှာ။
နောက်နှစ် ကျောင်းဆရာ ဆက်လုပ်၊ မလုပ် မတင်မကျဖြစ်နေတဲ့ တောတွင်းပျော် … အဖြေတစ်ခုကို ကျေကျေနပ်နပ်ရလိုက်ပြီ။
မုဂါမှာကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ မုဂါ…
ကျောင်းဝင်ကြေး မပေးနိုင်ရင် ကျနော် အကုန်လုံးတာဝန်ယူတယ်။ ကျနော်ရတဲ့လစာ ပြောင်ချင် ပြောင်ပါစေ။
နောက်နှစ် မုဂါ့ကလေးအားလုံးကျောင်းထားပါ။ နောက်နှစ် ကျနော် ဒီကိုပြန်လာပြီးစာသင်မယ်။
ကျနော့ အသံက တထစ်ထစ် နဲ့ တုန်ယင်နေတယ်။ မုဂါကြီးလည်း မျက်ရည်ဝဲနေတယ်။ ကျနော့် ကို ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြော။ ကျနော်လည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကျနော့ ကို ကြည့် နေတဲ့သူ့ သားကို
ကြည့် ပြီး မျက်ရည်ဝဲနေတယ်။
ဘယ်လောက်တောင် သနားစရာ ကောင်းတဲ့ကလေးလဲ။ သူကျောင်းမနေနိုင်တာ ကျနော်လုံးဝ မသိခဲ့ ။
သူ့ ညီ၊ သူနဲ့ ရွယ်တူ ကျောင်းသားတွေ စာဖတ်၊စာအံတာ တွေ ကျောင်းနားက သူ့ အိမ်လေးထဲကနေ
ငေးကြည့် နေရှာလိမ့် မယ်။ တခါတခါ သူ့ အိမ်လေးထဲကနေ ကျောင်း ကဗျာလေးတွေ လိုက်ရွက်နေလိမ့် မယ်။
ဒီအဖြစ်က ကျနော့ ကို တော်တော် စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲစေခဲ့ တယ်။
(ကျနော် အစက ဒီ လေထန်ကျောင်း ပိုစ်ကို ပေါ့ ပေါ့ပါးပါး ဟာသဆန်ဆန်၊ ရေးကြည့် ပါသေးတယ်။ ရေးရင်
ရေးရင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုဖက်ကို အလေးပေးတဲ့ ဖက်ကို ရောက်သွားတယ်။)
ကျောင်းတွင်းစာမေးပွဲ မစခင် ကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ရက်မှာ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး ကျေးရွာလူကြီးတွေ၊ ဘုန်းကျောင်းက ဒကာကြီးတွေက သီတာဘုန်းကျောင်းမှာ ကျနော့ ကိုခေါ် ပြီး အစည်းအဝေး သဘောမျိုး လုပ်တယ်။ သူတို့ အဓိက သိချင်တာက ကျနော် ဒီရွာမှာ ကျောင်းဆရာ ဆက်လုပ်၊ မလုပ်။
ဒီတစ်ကြိမ်တော့ကျနော် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုံးဖြတ်ပြောလိုက်နိုင်ပါပြီ။ ကျနော် နောက်နှစ် ဒီရွာကို ပြန်လာခဲ့ ပါ့ 
မယ်လို့ ။ ရွာလူကြီးတွေ ကျေနပ်သွားတယ်။ ဆရာတော်လေးကတော့ခေါင်းတညိမ့် ညိမ့် ။ သူနဲ့ ကျနော်က
နိုင်ငံရေး အကြောင်း လေကန်ဖက်တွေလေ။ နောက်တော့ကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ၊ နောက်နှစ် ကျောင်းရာသီမှာ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေ လုံလုံခြုံခြုံ အသုံးပြုနိုင်မယ့်အပေါ့ ရုံ ဆောက်လုပ်ဖို့ကိစ္စ၊
(ကျောင်းအနေအထား၊ ဘေးအိမ် အနေအထားအရ အိမ်သာဆောက်ဖို့ ကတော့ အဆင်မပြေ) နောက် သူတို့ ကို ကျနော်အထူးတောင်းဆိုတာက ရှေ့ နှစ် ကျောင်းဖွင့် မယ့်ရာသီမှာ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေး အားလုံး
ကျောင်းနေနိုင်ဖို့ နဲ့စာရင်းကောက်ထားပေးဖို့ ပါ။ ရွာလူကြီးတွေကသဘောတူတယ်။ နောက်ဒီ အစည်းအဝေးပွဲမှာ သူတို့ ကို ကျနော်ဆက်ပြီးတောင်းဆိုတာက.. ဒီနှစ် ၄တန်းအောင်မယ့်ကျောင်းသားလေး
တွေ ကျောင်းဆက်ထားဖို့သူတို့ မိဘတွေကို တိုက်တွန်းပေးဖို့ ပဲ။
ဇန္နဝါရီလကုန် ၊ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာ သူငယ်တန်းကနေ ဒုတိယတန်း အထိ ကျောင်းတွင်းဖြေပေးပြီး
တတိယတန်းနဲ့စတုတ္ထတန်း ကျောင်းသားတွေကို ကျနော်တို့ ရွာက အခြေခံမူလတန်းကျောင်းမှာဖြေဖို့ 
နင်တို့စိတ်အေးအေးထား ဖြေကြနော် … နင်တို့ ကို ငါစစ်ခဲ့ ပြီးပြီ… အဲဒါတွေကိုပဲ ပြန်မေးမှာ။ နင်တို့ ဘယ်လိုမှ စာမေးပွဲကျစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ငါ စိုးရိမ်တာက နင်တို့စာမေးပွဲခန်းမှာ ကြောက်ပြီး ကောင်း
ကောင်းမဖြေလိုက်လို့အမှတ်နည်းသွားမှာကိုပါ။ မကြောက်ကြနဲ့ ။
ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေက တခြားရွာမှာ သွားဖြေရမယ့်စာမေးပွဲမို့ပိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။
သူတို့ ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ စိတ်တွေပြေအောင် ကျနော်စကား လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး မေးလိုက်တယ်။
အဓိကတော့၎ တန်း ကျောင်းသားတွေကိုပါ။ နင်တို့ဒီနှစ် ၄ တန်း အောင်ပြီးရင် ဘယ်မှာတက်ကြမှာလဲ။
မော်လမြိုင်လား၊ မုဒုံလား၊ သံဖြူဇရပ်လား။ ကျောင်းသားတွေ မျက်လုံးတွေက အရောင်တက်လာတယ်။
သူတို့ တစ်တွေ မြို့ ပေါ်တက်ပြီး ကျောင်းတက်ချင်ကြတာကိုး။ သူတို့ တစ်တွေ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်
“ဘယ်မှာတက်မလဲ မသိသေးဘူးဆရာ” ဆိုပြီး အားတက်သရောလေသံတွေနဲ့ ။
သူတို့ တွေကြားမှာ နော်မြင့် မြင့် ရီ နဲ့စောအေးမင်းတို့မောင်နှမ ၂ယောက် တိတ်နေတာ သတိထား
“ မြင့် ရီ၊ နင်တို့ ကော”
အမှန်တကယ်လည်း သူတို့ မောင်နှမ ၂ယောက် ကျောင်းဆက်တက် မတက် ကိစ္စကို ကျနော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ သူတို့ မောင်နှမ ၂ယောက်က အပျို၊ လူပျိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ ကျောင်းတက်ချင်စိတ် ရှိရင်တောင်မှ သူတို့ အရွယ်နဲ့အတန်းတူတွေကြား တိုးဝင်ချင်တော့ မှာ မဟုတ်။
ကျမတို့ဆက်မတက်တော့ ဘူး ဆရာ ..ဆိုပြီး တွေတွေလေးနဲ့ ပြန်ဖြေတယ်။ စောအေးမင်းကို ကြည့် လိုက်တော့ကျနော့ ကိုမျက်နှာလွှဲသွားပြီး ခေါင်းငုံ့ သွားတယ်။ တခြားသူတွေ ဝမ်းသာတက်ကြွနေချိန်မှာ
သူတို့ မောင်နှမကိုကြည့် ပြီး ကျနော်စိတ်မကောင်း။ ကျနော်တို့ တွေ ဆယ်တန်းအောင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ နဲ့ခွဲလိုက်ရချိန် ဒါမှမဟုတ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့လူငယ်ဘဝကို
စွန့် လွှတ်ပြီး လက်တွေ့ ဘဝကို စတိုးဝင်ရောက်ချိန်က ခံစားချက်မျိုး သူတို့ မောင်နှမ ၂ယောက်မှာ ဖြစ်နေမှာ။
နင်တို့ တွေ အရွယ်ကြောင့်မတက်ရဲတော့ တာလား။ နင်တို့ မရှက်ကြနဲ့ ။ ငါ ဆယ်တန်း ဖြေတဲ့ နှစ်က
ဦးလေးကြီးတစ်ယောက် သူ့ သားနဲ့ အတူ ဆယ်တန်းလိုက်ဖြေတာ။ သူ့ ခမြာ ဆယ်တန်း အောင်ချင်လွန်းလို့ 
ဟို လူကြီးက ငါ ဒီနှစ်အောင်နိုင်တယ်။ ဒီလူကြီးက ဒီနှစ်တော့ငါကျိန်းသေပေါက်ပဲတဲ့အောင်မှာ ဆိုပြီး
လူတွေ့ တိုင်း ပြောတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြပြီး နင်တို့ အားမငယ်နဲ့ တက်သာတက်
ဆိုပြီး အားပေးစကားပြောလိုက်တော့နော်မြင့် မြင့် ရီက ခပ်နွမ်းနွမ်းပြုံးရင် ကျမတို့လယ်ထဲဆင်းကြရတော့ မယ် ဆရာ….
ဒီလိုနဲ့ တောက်ပချင်ရက်နဲ့မတောက်ပနိုင်ခဲ့ တဲ့တောတွင်းပျော်ရဲ့ကြယ်ပွင့် လေး ၂ပွင့်စောစောစီးစီး လယ်ကွက်ထဲ ကျရောက်ပြီး အရောင်မှိန် ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ တယ်။
ကလေးတွေ စာမေးပွဲပြီးတော့မတ်လဆန်းမှာဖွင့် မယ့်အဝေးသင်တက်ဖို့ကလေးမြို့ ကိုတက်ဖို့စီစဉ်ရတော့ တယ်။ နယ်စပ် ကျွဲမောင်း၊ နွားမောင်းရတဲ့ ငွေတွေရယ်။ ကျောင်းဆရာကရတဲ့လုပ်အားခ၊ နောက်ပြီး တောအဖွဲ့ အစည်းက ပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ ကြေးတွေရယ် စုပြီး ကလေးမြို့ ကို တက်လာခဲ့ တယ်။
အဝေးသင်ဖြေပြီးချိန်မှာတော့အိမ်အပြန် လမ်းစရိတ်မလောက်တော့ တာမို့ကလေးက အသိမိတ်ဆွေတွေ
အကူအညီနဲ့တောင်ပေါ်လမ်းမှာ ကားစပါယ်ယာဝင်လုပ်ရင်း အပြန်လမ်းစရိတ်ရှာရသေးတယ်။ အိမ်အပြန်လမ်းစရိတ် အလုံအလောက်ရချိန်မှာတော့မေလလယ်လောက်ရှိနေပြီ။ မကြာခင် မိုးကျတော့ မယ်။
မိုးကျလို့မဟာမြိုင်လမ်း မပိတ်ခင် အမှီပြန်ဆင်းလာခဲ့ တယ်။ ကလေးက ပါးလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရန်ကုန်ကို
ဝင်ပေး ခဏတည်းနေတုန်း ယောက်လမ်းက အမဝမ်းကွဲ မီးဖွားမယ့် ကြုံလာတော့ရွာပြန်ရောက်ဖို့ အရေး
နောက်ထပ် ၄ရက်လောက်ထပ်နောက်ကျ ပြန်တယ်။က ကျနော် ကလေးကပြန်ဆင်းလာတုန်းက အထက်မြန်မာပြည်မှာ မိုးတစ်ပေါက်မှ မကျသေးပေမင့်ရန်ကုန်မှာတော့ကောင်းကောင်းရွာနေပြီ။
စိတ်ကတော့ကျနော့် ကို မျှော်နေမယ် ကျောင်းကလေးကို သတိရနေတယ်။ အမ ဆေးရုံကဆင်းတာနဲ့ကျနော်လည်း ရွာကို ချက်ချင်းဆင်းချလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ ဒေသမှာတော့မိုးကောင်းကောင်းရွာနေပြီ။
ရွာအဝင် လယ်ကွင်းတွေဖြတ်တော့တချို့ လယ်တွေက ကောက်တောင်စိုက်နေကြပြီ။ အိမ်ကိုရောက်တော့ 
ကျနော့ အိမ်က အရင် နေလို့ ထိုင်လို့ ရရုံဆောက်ထားတဲ့တဲကုပ်သာသာ အိမ်ကလေးမဟုတ်တော့ ။
အသင့် အတင့် ကျယ်ဝန်ြး့ပီး ချောင်ချောင်ချိချိနေလို့ ရတဲ့သပ်သပ်ယပ်ယပ် အိမ်တစ်လုံးဖြစ်နေပြီ။ အမေ့ ကိုမေးကြည့် တော့ကျနော့ တပည့် လေးတွေက အမိုးဖက် လှည်း ၂ စီးတိုက် လာပို့ ပေးတာတဲ့ ။ အိမ်အတွက်သစ်တွေက သီတာရွာက သစ်ဖိုး လွှတိုက်ခလောက်သာယူပြီး အိမ်အရောက် အခမဲ့ လာပို့ ပေးတာတဲ့ ။
ကျနော်နဲ့ ပါလာတဲ့ပစ္စည်း ပစ္စယတွေ အိမ်ပေါ်တင်ချိန်မတော့အမေကေပြောလာတယ်။ သား ရွာထိပ်ဘောလုံ့းကွင်းကို သွားကြည့် လိုက်အုံး။ ဘောလုံးကွင်းမှာ ဘာရှိလို့ လဲ အမေ ပြန်မေးတော့ 
သားရဲ့ ရွာသားတွေ အရမ်း ဒုက္ခ ရောက်လာကြတယ်။ စစ်တပ်ကရွာပြောင်းခိုင်းလိုက်လို့သူတို့ တွေ မိုးရေ၊
ဗွက်ရေတွေကြားမှာ ဒီရွာကို ပြောင်းလာကြရတာ။ အမေတို့ ရွာကလည်း ဝိုင်းကူပြီး ပစ္စည်းတွေ သွားသယ်ပေးကြရတာ။ ကျနော် ချက်ချင်းပဲ ရွာထိပ်ကိုတက်သွားလိုက်တယ် ။ ရွာထိပ်ရောက်တော့ 
ဘောလုံးကွင်းနား ပတ်ပတ်လည်မှာ မီးခိုးတအူအူထွက်နေတဲ့ တဲကလေးတွေ ဟိုတစ်လုံး ဒီတစ်လုံး။
ကျနော် တဲတစ်လုံးချင်းဆီလျှောက်သွားပြီး တပည့် လေးတွေကို လိုက်ရှာနေမိတယ်။ တစ်နေရာမှာ သီတာ ကျောင်းဒကာကြီးနဲ့ တွေ့ တော့သူက ဆရာ ပြန်ရောက်လာပြီလား… ကျနော်တို့အရမ်း ဒုက္ခရောက်တယ်
ဆရာရယ်။ ကျနော်တို့ဆရာ့ ကို မျှော်နေခဲ့ ကြတာ… အခု ဆရာ့ ကျောင်းလေး မရှိတော့ ဘူးဆရာ။ ကျောင်းဒကာကြီ့း အသံက ဆို့ နင့် နေတယ်။ သူ့ မျက်လုံးမှာလည်း မျက်ရည်တွေ ဝေ့ လို့ ။ ကျနော် သူ့ ကိုဘယ်လို စကားလုံးတွေနဲ့နှစ်သိမ့် ပေးနိုင်မလဲ။ ကျနော့ ရင်ထဲမှာလည်း ပြောဖို့စကားလုံးတွေ ပျောက်နေတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ လို ခံစားနေရတယ်။ ဒေါသလည်း ထွက်နေတယ် ။ ရင်ထဲမှာတော့ရက်စက်ကြပါပေ့ ၊ လုပ်ရက်ကြပါပေ့စကားလုံးတွေကသာ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ်
ဖထီ… ဆရာတော်လေးကော ဘယ်မှာလဲ မေးတော့..
သူ.. ဟိုမှာကျန်ခဲ့ တယ်။ မိုးကုန်မှ သူ့ ကျောင်းဖျက်ပြီး ဒီကိုပြောင်းလာမှာ..
ဆွမ်းကြတော့ဘယ်လိုစီစဉ်ကြသလဲ ဖထီ…
ဒီကသွားပြီး ကျောင်းမှာ ညအိပ်ချက်ရတာပေါ့ ဆရာ။ စစ်တပ်က ဟိုမှာနေခွင့် မပေး .. လယ်ကလည်းစစိုက်နေပြီ။ မိုးကလည်း ရွာ ဒီကနေ နေ့ တိုင်းသွားဖို့ က အဆင်မပြေတော့သူ့ ကျောင်းကိုပဲ
အားကိုးနေရတယ်။ သူ့ ကျောင်းမှာပဲ အိပ်။သူ့ ကျောင်းကနေပဲ လယ်သွားလုပ်ပေါ့ ။
(သီတာရွာနဲ့ကျနော်တို့ ရွာက ၆မိုင်လောက်ဝေးမယ်။)
အမကြီးမိငယ်တို့ ကော ဘယ်နားမှာနေလဲ ဖထီ မေးကြည့် တော သူတို့ ဒီရွာဘက်ကိုမလာဘဲ တခြားရွာဖက်ကိုပြောင်းသွားတယ်။
ကျနော့ တပည့် လေးတစ်ချို့ ကို တွေ့ ပြီးဝင်နှုတ်ဆက်တော့ဘယ်သူမှ လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိကြ။ သူတို့ တတွေ အရမ်း ပင်ပန်းနေကြပြီ။ နော်ချဖေနဲ့ တွေ့ တော့သူအိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ သူ့ အိမ်ပေါ်တက် ဧည့် ခန်းလိုနေရာမျိုးမှာဝင်ထိုင်တော့သူ့ အဖွားထွက်လာပြီး သူ့ အိပ်ယာဘေးမှာ ချထားတဲ့ဝါးကျည်တောက်လေးကို လာချပေးတယ်။ ဝါးကျည်တောက်ထဲမှာက ကွမ်းရွက်ပေါင်း။ သူတို့ဒီလောက်
ခက်ခဲချိန်မှုာတောင်မှ သတိတရ ကျနော်စားဖို့ကွမ်းလာချပေးသေးတယ်။ အဖွားကိုကြည့် ရင်း ဝါးကျည်တောက်လေးကို လှမ်းယူပြီး လက်ထဲကိုင်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီညနေ ကျနော် ကွမ်းမစားလိုက်တော့ ပါ။
ကျနော် ရောက်တာမြင်တော့နော်ချဖေရဲ့အကိုကြီး အိမ်အောက်ကတက်လာပြီး လာစကားပြောတယ်။
ဆရာ ကျနော်တို့ အိမ်ရယ်၊ ဘေးနားကအိမ်တစ်လုံးရယ် နောက်ပြီး မခင်အေးတို့ အိမ်ရယ် အိမ် ၃လုံး မီးရှို့ ခံလိုက်ရတယ်။ကျနော့အိမ်အောက်က နွားလှည်းပြန်တောင်းတာ၊ နွားလှည်းပါတစ်ခါတည်း မီးရှို့ လိုက်ကြတယ်ဆရာ။ နွားလှည်းဆိုတာက တောသူတောင်သားတွေရဲ့အရေးကြီ့း တဲ့မရှိမဖြစ်ယာဉ်ပဲ။
ကြွက်မနိုင် ကျီမီးရှို့ တဲ့ ဇာတ်မှာ မြေဇာပင်ဖြစ်ခဲ့ ရတာ ကျနော်စာသင်ခဲ့ တဲ့သီတာအုပ်စုတင်မကပဲ ဒီအုပ်စုနဲ့ 
မလှမ်းမကမ်းက သူတော်ရွာတောင် အဆစ်ပါသွားသေးတယ်။ မိုးဦးစကျလာလို့လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် ဝင်ဖို့ 
ပြင်ဆင်နေကြတဲ့သူတို့ တစ်တွေ ရုတ်တရက်ကြီး ရွာနှင်ခံရတော့ကယောက်ကယက်ကြီး ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။
သီတာ၊တောကျောင်းရွာသားတွေ ကျနော်တို့ ရွာကိုပြောင်းလာကြကုန်ပေမယ့်ဝဲသီလာရွာသား တွေကပြောင်းမလာကြပဲ သူတို့ ရွာကမထွက်ဘဲ တင်းခံနေလိုက်ကြတယ်။ သီတာရွာက ကျနော့လေထန်ကျောင်းလည်း ပျက်သွားပြီးမို့အဲဒီရွာက လူမမယ်ကျောင်းသားလေးတွေ ကျောင်းနေဖို့အရေးက
ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတယ်။ သူတို့ မိဘတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသာ ရင်တမ မနဲ့ စောင့် ကြည့် ရုံပဲ ရှိတော့ တယ်။ ကျနော်တို့ ရွာမှာ စတုတ္ထတန်းထိ အတန်းကျောင်းရှိတာမို့ရွာပြောင်းလာတဲ့ကလေးတွေ ကျနော်တို့ ရွာမှာ
ကျနော် ၄ တန်းအောင်သွားတဲ့ နော်ချဖေကို …နင်ကောဘယ်မှာ ဆက်တက်မှာလည်း မေးတော့သူ့ အကို
ကြီးက ..နောက်နှစ်မှပဲ ဆက်တက်ခိုင်းတော့ မယ်ဆရာ။ ဒီနှစ်တော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့ ဘူး ဆရာတဲ့။ နော်ချဖေ ခမျာ.. ဒီနှစ် ၅ တန်း အဆင်ပြေပြေနိုင်မယ်လို့ အားခဲထားရာက တည်ငြိမ်နေတဲ့သူတို့ 
ဘဝ ရုတ်တရက် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာမို့သူ့ ရည်မှန်းချက်လေး စိတ်မကောင်းစွာ ရပ်တန့် လိုက်ရတယ်။ နော်ချဖေဆီကနေ တခြား တပည့် လေးတွေကို စုံစမ်းကြည့် တော့၎ ၊ ၅ ၊ ၆ ယောက်လောက်သာ မြို့ မှာ ကျောင်းတက်ဖို့မြို့ ကို တက်သွားပြီး နော်ကလျာ ကတော့သူ့အဖေရှိရာ ထိုင်းဖက်ကို တက်ဖို့ပြင်ဆင်
နေတယ်တဲ့ ။ ဝဲသီလာရွာက မနှင်းနှင်းအေးတစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကတော့မသိရသေး။ ဒီတစ်ကြိမ်
ခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုက်ခတ်လိုက်ခံလိုက်ရတဲ့မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့်တောတွင်းပျော်ရဲ့ တပည့် အတော်များများ
စာသင်ခန်း အပြင်ဖက်ကို ရောက်ကုန်တယ်။
သူတို့ တစ်တွေ ကျေးဇူးကြောင့်ကျနော် တင့် တင့် တယ်တယ်အိမ်တစ်လုံးမှာ လုံလုံခြုံခြုံနေရချိန်မှာ သူတို့ တစ်တွေ
တဲကုပ်လေးတွေမှာ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း ထိုးဆင်းပြီး နေ နေကြရပြီ။ သူတို့ တစ်တွေ မိုးရေ၊ ဗွက်ရေတွေ
ကြားမှာ တပင်တပန်းကြီး ရုန်းကန်ပြောင်းရွေ့ လာချိန်မှာ ကျနော် လက်တောင်မကမ်းနိုင်ခဲ့ ။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ကျနော့် တပည့် လေးတွေရဲ့နဖူးထက်ကချွေးစက်တွေတောင် သုတ်မပေးနိုင်။
ကျနော့ ရင်ထဲမှာ တော်တော်လေး မချိအောင် ခံစားလိုက်ရတယ်။
ကျနော် ရွာသားတွေကို လိုက်လံအားပေး စကားပြောရင်း သူတို့ ရဲ့ညို့ မှိုင်းနေတဲ့ မျက်ဝန်း ခံစားချက်တွေကို
အဓိပ္ပါယ်ဖော်ကြည့် တော့နာကြည်းခံပြင်းမှုဆိုတာထက် ၊ ဒါ ငါတို့ ရဲ့ဘဝပေး ကုသိုလ်ကံအဖြစ်သာ ရောင့် ရဲ
လက်ခံ လိုက်ကြပုံမျိုးပဲ။ အဟိတ် တိရစ္ဆာန်တွေလို ပြုသမျှနုခံရမယ့်ဒီအတွေးတွေက ဘယ်အချိန်ကစပြီး
သူတို့ ရင်ထဲကို ဝင်စီးထားတာလဲ…… လွန်ခဲ့၁၀နှစ်ကလား။ အနှစ် ၂၀ ကလား… ဟိုး အနှစ် ၅၀ ကလား။
အချိန်ကာလ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့အရာရာဟာ ပြန်လည့်နေသားတကျ ရှိလာပါပြီ။ အခုဆို သီတာ၊ တောကျောင်းရွာဟာ ကျနောတို့ ရွာဘေး ကပ်ရက်မှာ စုစည်းမြိုင်ကျေးရွာ အဖြစ်နဲ့ တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်
ရှိနေပါပြီ။ ခုချိန်မှာ တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် ကျောင်းဆရာ မဟုတ်တော့ ပေမယ့်သူတို့ တစ်တွေ ကတော့ဆရာ.. ဆရာ နဲ့လေးလေးစားစား ခေါ်နေကြတုန်း။ ဒီလို ခေါ်သံကြားမိလေတိုင်း ကျနော့ 
စိတ်၊ ဝိဉာည်တွေက ဆရာတင်ဋ္ဌေး နဲ့ကျနော် လေတိုးသံ တဝုန်းဝုန်းကြားမှာ အော်ဟစ် စာသင်လာခဲ့ ကြတဲ့ 
မရှိတော့ ပြီဖြစ်တဲ့လေထန်ကျောင်း ကလေးဆီကိုသာ…………………..
တစ်နှစ်က ဒီဇင်ဘာလကုန်လောက်မှာ မြန်မာပြည်ကို ခဏပြန်လာတော့အမကြီး မိငယ်တို့ ရှိတဲ့ ရွာကို
အလည်သွားခဲ့ တယ်။ ဟို ရောက်တော့အမကြီးမိငယ် မရှိ။ သူခြံထဲဆင်းနေလို့မတွေ့ ခဲ့ ရ။ အမရဲ့အမေ
ဒေါ်လေးမေနဲ့ သာ တွေ့ ခဲ့ ရတယ်။ တွေ့ တွေ့ ခြင်း ဒေါ်လေးမေ ကျနော့ ကို မမှတ်မိ။ ဒေါ်လေး မျက်စိမှုန်နေပြီ။
ကျနော့ ကို မှတ်မိလာတော့သူဝမ်းသာ အားရနဲ့ကျနော့ အကြောင်းတွေ မေးလာတယ်။ ဆရာ.. မလေးကို
ထွက်သွားအကြာကြီးပဲနော်..ဟိုမှာအဆင်ပြေရဲ့ လားဆရာ။ ဟိုမှာ ဘာလုပ်တာလည်း ဆရာ….
သူသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေက တရစပ်… ကျနော် အေးအေးဆေးဆေးပြန်ဖြေပေးလိုက်ရင်း သူတို့ မိသားစု
အကြောင်းတွေမေးကြည့် တော့အပျိုကြီး အမမိငယ်က ရော်လာခြံရှင်ကြီးဖြစ်နေပြီ။ ဒေါ်လေးမေ ရဲ့ မြေး
ကျနော့ တပည့် ကတော့ထိုင်းမှာ။
ဒေါ်လေးနဲ့အခုလို ပြောဆိုနေရတော့ ကျနော့ စိတ်တွေက တချိန်က စာသင်ခဲ့ တဲ့သီတာရွာလေးဆီကို အပြည့် ရောက်သွားတယ်။
ဆရာ…ကွမ်းစားတုန်းပဲလား ဆရာ.. ကျနော် ကွမ်းစားတာကိုမှတ်မှတ်ရရ မေးလာတော့ 
ကျနော် ကွမ်းမစားတော့ တာ ကြာလှပြီ ဒေါ်လေးရဲ .။
ဘာလဲဆရာ .. မလေးမှာကွမ်းမရှိလို့ လား…
မလေးမှာလည်း ကွမ်းရှိပါတယ် ဒေါ်လေး။ တမင်မစားတော့ ဘဲ ဖြတ်လိုက်တာပါ။
ဆရာ ကွမ်းမစားဘဲ နေနိုင်တာအံ့ သြတယ်။ ဟိုတုန်းက ဆရာ ကွမ်းစားတာများ အဖိုးကြီးလေးတစ်ယောက်လိုပဲ… ပြောပြီး ဒေါ်လေးမေ ရယ်တယ်။
နောက်တော့ဒေါ်လေး နဲ့ ကျနော် ပြောစရာ စကားမရှိတော့ သလို တိတ်သွားတယ်။ ဒေါ်လေးက
အိမ်ရှေ့ ဆီကို ငေးကြည့် နေတယ်။ ကျနော်လည်း ဒေါ်လေး ငေးကြည့် နေသလို လိုက်ငေးကြည့် နေလိုက်တယ်။ အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာ ခြံစည်းရိုးသဘောမျိုးစိုက်ထားတဲ့သီဟိုဠ်ပင်က ရွက်ခြောက်တွေ
လေတိုက်တိုင်း တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေနေတယ်။ ဒါကို ကျနော်လိုက်ငေးကြည့် နေမိတယ်။
ဆရာ….. သစ်ရွက်တွေ အရမ်းကြွေနေတယ်ဆရာ။ ဒေါ်လေးက ရုတ်တရက်ပြောလာတော့ဒေါ်လေးကိုဖက်ကို လှည့် ကြည့် လိုက်တယ်။ ဒေါ်လေးပုံစံက တွေတွေငေးငေး။ ဒေါ်လေး စိတ်တွေက တစ်ခုခုများ
ခံစားနေရသလား.. ဒါမှမဟုတ် ….ဒါမှမဟုတ်….
ကျနော့ ရင်ထဲ ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။
ဒေါ်လေးရယ် ဒီရာသီက သစ်ရွက်အဟောင်းတွေ ကြွေပေးရမယ့်ရာသီဲ။ သူတို့ တွေကြွေသွားတော့ မှ နောက်ထပ် ရွက်သစ်တွေထွက်လာနိုင်မှာ။ သူတို့ကြွေနိုင်အောင် လေကတိုက်ပေးပြီး ကူညီတာ…. လို့ 
ဒေါ်လေးစိတ် ပေါ့ပါး သွားအောင် ရီစရာလုပ်ပြီး ပြောလိုက်တော့ …
ဒေါ်လေးမေက ကျနော့ကို လှည့် မကြည့် ဘဲ
“သစ်ရွက်ကြွေများတော့အမှိုက်ရှုပ်တာပေါ့ဆရာရဲ့ ” တဲ့ ။ ။
ဂေဇက်သူ၊ ဂေဇက်သားများကို ချစ်ခင်လေးစားလျှက်
ခေတ္တ မြို့ ပေါ်။
ဖြည့် စွက် [ 18 /6/2016 ]
ဒီပုံလေးကို ကော်မန့် မှာ ပေးချင်ပေမယ့်ပေးမရလို့ဒီအထဲထပ်ဖြည့် လိုက်တယ်။
ဒီဆိုင်းဘုတ်နောက်တည့် တည့် က အဝတ်လှန်းကြိုးတန်းရှိတဲ့အိမ်က နွားလှည်းပါ ပါသွားတဲ့ 
တပည့် မလေး နော်ချဖေအိမ်။
ခုတော့ငြိမ်းချမ်းသွားပြီမို့ကလေးတွေ အေးအေးချမ်းချမ်းစာသင်နိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပေမယ့် 
သွားရေးလာရေးကတော့နည်းနည်းတော့ခက်နေတုန်း။
ပြီးသွားပါပေါ့။ ဒီအပိုင်းအပါအဝင် အစအဆုံးကို သိမ်းထားပြီး အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ဖတ်ဦးမယ်။
တွေးမိတာက ဒီဇာတ်လမ်းက စကားပြောလေးနဲ့ရေးထားသမို့ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအဖြစ် ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်
ဒါကိုပဲ ဇာတ်ညွှန်းပုံစံလေး ပြန်ပြောင်းပြီး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ရိုက်လို့ရဦးမှာ
. နောက် ထပ်တွေးမိတာက
ရွာထဲက လူငယ် လူကြီးတွေထဲ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဝါသနာအိုးတွေ စုပြီး ဒီလို ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဗွီဒီယို ရိုက်ရရင် ကောင်းမယ်လို့
ဘယ်သူ ဘယ်နေရာက သရုပ်ဆောင်မလဲ
ဒီလို ဇာတ်လမ်းလေးပြီးရင် ဟာသဇာတ်လမ်းတွေ ထပ်ရိုက်။ အရင်းကျေအောင် အခွေကို ကိုယ့်ရွာသူားတွေပဲ ပြန်ဝယ်အားပေး။
ထိုင်နေအကောင်းသား ထသွားမှကျိုးမှန်းသိ ဖြစ်ဖို့ ဂျောက်တွန်းနေသလား ဆက်ဆက်။
အဲလို ရိုက်ချင်ရင် ဖွေးဖွေး ကို အရင် ရွာထဲ ခေါ်ခဲ့ဦး။
ပြီးရင် သူပဲ ပျောက်ပျောက်သွားတာ
အပိုင်းတွေ အကုန်လုံး မဖတ်ရသေးပါဘူး…။
ဟင် ဒါဆို ခင်ဗျားက ဘာလို့ ကွန်းမန့်ဝင်ရေးနေရတာလဲ…လို့
တောတွင်းပျော်ဆိုတဲ့ ညီလေးကို ခင်မင်ရင်းနှီးချစ်ခင်ရင်းစွဲ ရှိနေတဲ့
စိတ်ကြောင့် ကွန်းမန့် ၀င်ရေးပြီး အားပေးလိုက်ချင်တဲ့ စိတ်က
အခုလို ၀င်ပြီး ကွန်းမန့်ရေးဖြစ်သွားတာပါ ပဲ ညီလေးရယ်…။
ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ ဒေါင့်မကျိုးတဲ့လူ အတွက်
ဒေါင့် မကျိုးသော ကွန်းမန့်လေးပေါ့ဗျာ…။
အချိန်ရရင် ပို့စ်ကို အသေအချာ ဖတ်ပြီးသကာလ…
တစ်ခါပြန်လာပြီး ကွန်းမန့်လေး ရေးဦးမယ်ဆိုတာလေး…
ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ….. ဦးလေးဘလက်ချော
ကျနော် ဒီတရုတ်နှစ်ကူး အားလပ်ချိန်လေး ခဏ မြို့ ပေါ်တက်လာတုန်း
ဒီရွာထဲ ဝင်လာရင်း ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲ တွေးရင်း ရေးလိုက်မိတဲ့ ပို့ စ်ပါ။
ရေးရင်း ရေးရင်း အရစ်တွေရှည်တွေမိလို့ပိုစ်က ရှည်ထွက်သွားရော။
အစကတော့ရွာထဲရောက်တုန်းရောက်ခိုက် တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် ဒီရွာထဲမှာရှိနေကြောင်း
ပြရအောင်လို့ပိုစ်တိုတိုလေးတစ်ခုလောက်ရေးမယ်အကြံနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။
လေထန်ကျောင်းကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်တော့ ……
အဲဒီ၂ခုနဲ့ ပြည့်စုံတယ်ဆိုကတည်းက အဲဒီရွာသူားတွေ မညံ့ဖျင်းကြဘူး။
မိဘတွေက ကျောင်းလည်း မထားနိုင်၊ ထားလည်း မထားချင် (ကလေးကို အလုပ်လုပ်ခိုင်းချင်တာ)
ကလေးတွေကလည်း တောမှာနေပြီး ဘာမှဗဟုသုတမရှိ ခပ်ထုံထုံ ခပ်ဖျင်းဖျင်းတွေများတဲ့ ရွာတွေတောင် တွေ့ဖူးတယ်။
အဲဒီရွာတွေနဲ့စာရင် ဒီရွာကလေးက အတော်တိုးတက်တယ်လို့တောင် ပြောချင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်စွမ်းတဲ့နေရာကနေ တတတ်တအား အားဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကို သိမ်းလိုက်ပေမဲ့ စာတွေ ဆက်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် တောတွင်းပျော်ရေ။
ငှက်ကလေး အကြောင်းကတော့ လောကကြီးထဲ ကိုယ်မသိတဲ့ အရာတွေ အကြောင်းတွေ အများကြီးမို့ မဝေဖန်လိုပါဘူး။
ယုံသူလဲ မမှား နိုင်သလို မယုံသူကိုလဲ အပြစ်မတင်သင့်။
ကလေးမြို့ နဲ့ မဟာမြိုင်လမ်း လမ်း ကိုတော့ ရင်းနှီးပါတယ်။
ကလေးဘက် ဆို ချင်းတွေချည်းမှတ်တာ။ ကရင် တွေလဲ ရှိတယ်ပေါ့။
လူတွေ နေနေတဲ့ နေရာ ကို အကြောင်းရှိလို့ ပြောင်းစေ တာ ကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ အတွက် လုံလောက်တဲ့ ရှင်းပြပေးမှု၊ တာဝန်ယူ ပေးမှု၊ ပြန်လည်နေရာချထားမှု ဆိုတဲ့ တာဝန် တွေ မယူနိုင်ကြတာ ကို နားမလည်ဘူး။
လူတွေ ကို အုပ်ချုပ်မှု အကြောင်း မသိ နားမလည် ရင်လဲ နေရာယူအုပ်ချုပ်မနေကြပါနဲ့တော့။
အတိတ်အကြောင်းလေး ကို သတိတရ မျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
.ဇာတ်တော်တွေထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကို .နာနေတဲ့ ဖားကလေးဟာ နွားကျောင်းသားရဲ့ တုတ်နဲ့ ထောက်ခံရလို့ သေပြီး နတ်ဖြစ်သွားတာပါပါတယ်။
.တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း ကုသိုလ်စိတ်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
.အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဘ၀ကနေ .ကံကောင်းတွေ ဖြတ်ချွေလို့ သေပြီး ကောင်းတဲ့ .ဘ၀မြန်မြန်ပြောင်းရတာလည်းရှိပါတယ်။
(တဲကုပ်လေးကိုစွန့်ပြီး အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း ပြောင်းရသလိုပေါ့)။
.ပိုကောင်းတဲ့ ဘ၀ရောက်ရမယ်ဆိုရင် မြတ်တယ်ပြောရမှာပေါ့။
ကွန်ပြူတာနဲ့ စာရိုက်တဲ့အလုပ်က ကျနော့ လက်ရှိဘဝအလုပ်နဲ့လုံးဝမအပ်စပ်သလိုကြီးဖြစ်နေတယ်။
တောထဲမှာဆို ဒီကျနော့ကွန်ပြူတာလေးက ဗွီဒီယိုကြည့် ဖို့ ၊ ဂိမ်းကစားဖို့ လောက်သာ။ စာရိုက်တာလည်း
မကျင့် ။ ကျင့် လည်းမကျင့် နိုင်။ တောထဲအဆောင် စည်းကမ်းကလည်း ည၁၀ထိုးမီးစက်ပိတ်။ မအိပ်ချင်လည်းအိပ်၊အိပ်ချင်လည်းအိပ် အားလုံးတိတ်။ နောက်နေ့ စောစော တောထဲဝင်အလုပ်ဆင်းရ မှာကိုး။ အလေ့ အကျင့် မရှိတော့ခုလို ပိုစ်ရှည်ရှည်ရေးမိတော့တော်တော် ဒုက္ခရောက်တော့ တာ။ အကြမ်းရေးထားတာဖတ်ပြီး တစ်လုံးချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းရိုက်တာတောင် မှားလိုက် ဖျက်လိုက် ရေးလိုက်။
ပိုစ်တစ်ခုကို တစ်ညလုံးနီးရိုက်ရတယ်။ စထားတဲ့ ကိစ္စ အားလပ်ရက် မကုန်ခင်မှာ အပြီးသတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစား
ရေးနေရတာမို့တခြားသူတွေ ရေးတဲ့ ပိုစ်တွေကို ဝင်မဖတ်နိုင်၊ ဝင်မမန့် နိုင်တာ သည်းခံပေးကြစေလိုပါတယ်။နောက်ပြီး အင်တာနက်လိုင်းလည်း သိပ်အဆင်မပြေတာမို့ကွန်ပြူတာထဲ
ရေး သိမ်းထားတဲ့ပိုစ်တွေကိုတွေကို ဝိုင်ဖိုင်ရတဲ့လဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတင်ရတာကြောင့် 
ကော်မင့် တွေ ချက်ချင်းမပြန်နိုင်ခဲ့ တာလည်း သည်းခံပေးကြပါ။
ကျမလည်း စာကို လက်တချောင်းချင်းရိုက်ရတာ။ပို့စ်တပုဒ်တင်ရတာ တညမအိပ်ကြေးရိုက်ရသလိုပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ရေးချင်တာလေးရေးပြီးရင် ရင်ထဲ ကျေနပ်သွားတာပဲ။
အဲဒီ ဖီလင်လေးကို တော်ပျော်လေးလည်း ကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီရောဂါက ဖြစ်မိရင် ကုရခက်တယ်။နာတာရှည်ရောဂါ။
ဖတ်ရွေးသာရှိသေးရင် ဆုရမယ့်ပို့စ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
.ညို့ မှိုင်းနေတဲ့ မျက်ဝန်း ခံစားချက်တွေကို
.စာအရေးအသားကော အတွေးအခေါ်ကော တအားကောင်းတဲ့သူ။ မဂဇင်းတိုက် ပို့ကြည့်ရင် ကောင်းမယ်နော်။
ဒီပိုစ့်လေးရဲ့ အရေးအသားကို အရမ်းကြိုက်တယ်….။ မျက်စိနဲ့ မြင်နေရသလို ရေးတတ်လိုက်တာ…။ ကလေးတွေရဲ့ အဖြစ်ကိုလဲ စာနာပါတယ်….။ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကိုလဲ မြင်ရတယ်….။ ဗဟုသုတတွေလဲ ရပါရဲ့…
ကျနော်ဖတ်နေချိန်မှာ ကိုရင်ကတော့ တောထဲပြန်ရောက်နေလောက်ရောပေါ့
ပြန်တက်လာရင် ဒီပို့စ်လေးကို ပြန်လာကြည့်ပါဦး
လေထန်ကျောင်းမှာ လေရိုင်းထက်ပိုတဲ့ လေတွေတိုက်လာလို့ ကျောင်းကလေးပါ ပျောက်သွားရရှာတာ………
တစ်ချိန်မှာတော့ အဲဒီနေရာတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာမှာပါ..
(စကားအတင်းစပ် အဲ့လိုတောကျောင်းလေးတွေမှာ ဆရာလုပ်ဖို့ တွေးခဲ့ဖူးတယ်။ ကျောင်းတက်နေရင်း မတောက်တခေါက် ဂိုက်ဆရာ လုပ်နေတုန်းကပေါ့ဗျာ)
-မန်းဂဇက် စာအုပ်တစ်အုပ်ထပ်ထွက်ဖြစ်ရင် ဒီပို့စ်ကို ..ထိပ်ဆုံးက ထည့်စေချင်ပါတယ်ဗျာ..
-စစ်ပွဲတွေ ရှိနေသရွေ့…ခလေးတွေအများကြီး မြေစာပင်ဘ၀ ရောက်ကြရအုံးမှာမို့..
သူကြီးမင်းရဲ့ စာစောင်မှာ ဒီပိုစ့်ကို ဖေါ်ပြပေးပါလို့
ဖတ်သူ မည်သူ့ကိုမဆို ရသ မျိုးစုံ တကယ်ပေးနိုင်တဲ့
အရေးအသား၊ အကြောင်းအရာ ကောင်းတဲ့
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့် တစ်ပုဒ်ပါ၊
ပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် ကိုတောတွင်းပျော်။
သူကြီးရဲ့ သတင်းစာက ရသ အသားမပေးဘူးလို့ ယူဆရတယ်ဗျ
သူ့ သတင်းစာမှာ ရသ ဆိုလို့ ကဗျာစာကြောင်းလေး ဆယ်ကြောင်းလောက်ပဲ ခပ်တိုတိုတုတ်တုတ်ပါရရှာတာ
နောက်ပြီး အဲ့ကဗျာတောင်မှ တော်ရုံကဗျာ ထည့်ပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူးရယ်
ဒီပိုစ့် အစကနေအဆုံးထိကိုသာ သတင်းစာထဲ ထည့်မယ်ဆိုရင်
အဲ့သတင်းစာ သိမ်းထားဖို့အတွက် US ထိ ကျနော်
ရသဆရာကြီးမောင်သာရကိုတောင်.. ရသမရေးပေးပဲ.. သုတဆောင်းပါး.. ရသနဲ့ရောရေးပေးဖို့ပြောထားတာခင်ဗျ..။
ယူအက်စ်ကမြန်မာတွေ(အများစု) ….. ရသဖတ်နိုင်တဲ့ အဆင့်တော့မရောက်သေးဘူး…ထင်..။
စိတ်ထဲကနေ မျက်စိထဲမြင်လာလောက်အောင် ရေးနိုင်စွမ်းပါတယ်…
တစ်ကယ့်အဖြစ်ပျက်လေးတွေက ၀ထ္တု တွေထက်ကို နာကျင်ခံစားရတာပါလား…
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်တောင်များနေမလဲ…
ဗမာပီပီ ကံကိုသားရိုးမယ်ဖွဲ့ လိုက်ပါတော့မယ်…
စာကို အချိန်လုပြီး ကြိုးစားရေးတဲ့ ဇွဲကို လေးစားပါတယ်နော်
ကိုယ်သာဆို သေချာတယ် ရေးဖြစ်မှာ မဟုတ်
ရာသီစက်ဝန်းတပတ်လည်တိုင်း ရွက်ကြွေတတ်တဲ့ သဘာဝကတော့ ရှိမြဲပဲပေါ့
ဒါပေမဲ့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ လူ့ပယောဂကြောင့် ကြွေကျတဲ့ ရွက်တွေ ပျက်ရတဲ့ ပျိုးပင်တွေကတော့ စိုက်ပျိုးခဲ့ရ ရင်းခဲ့ရသူတွေရဲ့ သွေးချွေးတွေ အချိန်တွေ နှမြောစရာကောင်းတာပေါ့
မြန်မာပြည်မှာတဲ့ အရင်က အတိုင်းတာထက် ပိုများတဲ့ တောအုပ်အကျယ်တွေ ခုချိန်မှာ ပိုများလာတယ်တဲ့
တကယ်တမ်း အရင်က ရှိခဲ့တဲ့တောအုပ်ဆိုတာ သူ့အင်္ဂါရပ်နဲ့ညီတဲ့ တောကောင် မျိုးရိုင်း အပင်ကြီးတွေ ပြည့်စုံနေတဲ့ တောအုပ်အကြီးတွေကို ပြောတာ (တောကောင်း)
အခုခေတ် များလာတာက ချူံ ပုတ်တွေဆူးပင်တွေပေါတဲ့ ( တောညံ့တွေ )
လူဦးရေဆိုတာလည်း အဲ့လိုပဲ များတိုင်းကောင်းတာမှတ်လို့
ဒေါ်လေးပြောသလို ရွက်ကြွေများလို့ ဖြစ်တဲ့ အမှိုက်တွေ ဖြစ်လာမှာပေါ့
မယုံရင် fb ပေါ်တက်ကြည့်
ဇာတ်လမ်းကော အရေးအသားပါ ဂွတ်သဗျာ ၊
အပိုင်းအားလုံး ဖတ်ပြီးပါပြီ ၊ သြော် . . . ဘဝတွေ ဘဝတွေ
ရသ အပြင် ဗဟုသုတတွေလည်း အများကြီးပေးပါတယ်။
ကျနော်တို့ မသိတဲ့၊ အသိမှားနေတဲ့ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ်
အခြေခံထားတဲ့ ဘ၀ သရုပ်ဖေါ် လည်းဖြစ်ပါတယ်။
နဲ့ အဆုံးပိတ်ထားတော့.. ပိုလို့ဆိုး..
စ တင်ကတည်းက ပို့စ်တိုင်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်…
ပို့စ်တိုင်းကို မရိုးနိုင်ရအောင် ရသတွေပေးပြီး ဇာတ်သိမ်းမှာ လှိုက်ဖိုမောရတယ်…
ကလောင်သွားထက်ပါပေ့ဗျာ… ပရိုလက်ပါဗျို့… နောင်လည်း များများရေးပါဦး…
အစအဆုံးဖတ်​ကြည့်​ပြီး​တော့ ​ပြောစရာက စကားလုံး​လေး သုံးလုံးပဲထွက်​လာတယ်​ ။ ဘာလဲဆို​တော့ ” အားနာတယ်​ ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး​လေးပါပဲ ။ ဘာကို အားနာတာလဲဆို​တော့ အဲ့ဒိလို ​နေရာ​လေး​တွေမှာ ဘာမှသွားလုပ်​မ​ပေးနိုင်​လို့ ။
ခုချိန်​ခါကလည်း ရွက်​​ဟောင်း​တွေ ​ကြွေ​နေတဲ့ အချိန်​မို့ တိုက်​ဆိုင်​လိုက်​တာ ” ရွက်​​ဟောင်း​တွေ အကုန်​​ကြွေ ပြီး ရွက်​သစ်​ စစ်​စစ်​ ​တွေ​ဝေနိုင်​ပါ​စေ ” လို့ ဆန္ဒ ပြုလိုက်​ပါတယ်​ ။
စာမူအဖြစ် ပို့တင်တဲ့ ဝတ္ထုပါ လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပြီး စာမူအနေနဲ့ ပို့ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် . . . ဒါဟာ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်သလို သမိုင်းကြောင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ဆရာထွန်း။
ခု ကော်မန့် တွေ တက်လာတော့အမှတ်ရစရာတွေဖြစ်လာပြန်တယ်။
ဒီပိုစ်တင်ပြီးပြီးခြငိး တောထဲပြန်ဝင်သွားခဲ့ လို့ 
ကော်မန့် တွေ မပြန်နိုင်ခဲ့ ဘူး။ အချိန်အတော်ကြာကြာမှ ပြန်ဝင်ဖတ်ရတော့ 
ကော်မန့် တွေပြန်ပြီး ကိုယ့် ပိုစ်ကိုယ်ဖော်သလို မဖြစ်ချင်တာကြောင့်ဒီအတိုင်းပဲ
ခု ကော်မန့် တွေပြန်ဖတ်မိပြီး ဆရာနေဝန်းနီရဲ့ကော်မန့် ကို ပြန်ဖတ်မိပြီး
ဆရာနီတစ်ယောက် ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ စံစားခံစားနိုင်ပါစေ ..
ရင်နဲ့ရေးတဲ့စာပေါ့နော်။ ကောင်းတာထက်တောင် ပိုကောင်းသေး။ တောမျောက်ကြီး စာရေးဆရာဖြစ်ပြီ။
ကိုယ်တွေ့ လေးကို တတ်နိုင်သမျှ ဖတ်လို့ ကောင်းအောင် မနည်းပြန်စီရေးထား
ဆရာမကြီးရဲ့အားပေးစကားကြားရတော့အများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဒီအထဲက ဒေါ်လေးမေတစ်ယောက်ကတော့ 
လွန်ခဲ့ တဲ့တစ်နှစ်ကျော်က လူကြီးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားရှာပါပြီ။
သူ့သားသမီးတွေကတော့လယ်တွေခြံတွေရှိတဲ့အရင်ရွာဟောင်း
ခုချိန်မှာ ဝဲသီလာ / သီတာ / တောကျောင်းရွာတွေဟာ မူလတန်းကျောင်း